အနုပညာ အလုပျကို လုပျဖို့ လုံးဝ စိတျကုနျသှားတဲ့ အကွောငျးရငျး ကို ပွောပွလာတဲ့ သရုပျဆောငျ နဝရတျ – Let Pan Daily
ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ နဝရတျကတော့ အနုပညာ လုပျငနျးတှလေုပျကိုငျခွငျးမရှိတော့ပမေယျ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနဆေဲဖွဈတဲ့ ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။လူမွငျကှငျးမှာထှကျပျေါလာခွငျးသိပျမရှိပမေယျ့ မီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ သူမအနနေဲ့ အနုပညာလောကကို လုံးဝစိတျကုနျသှားခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရငျးကိုပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ နဝရတျက အနုပညာအလုပျတှရေပျနားလိုကျရတဲ့ အကွောငျးရငျး ကို ” လုပျခဲ့သမြှ လညျးကုနျပွီပေါ့နျော ဒီ့ထကျလညျး လုပျပွစရာမရှိတော့ဘူး ကိုယျ့စိတျထဲမှာရော ရငျထဲမှာရော ခန်ဒာကိုယျသှေးသားထဲမှာပါ လုပျတတျတဲ့အရာအကုနျလုံးကို လုပျခဲ့ပွီးပွီ အခုကကတြော့ လုပျသငျ့တာနဲ့ လုပျခငျြတာနဲ့ကို လုပျနတေယျ” “၁၅ နှဈလုံးလုံးကို ကိုယျကပွညျ့ပွညျ့၀၀ပေးပွီးပွီဆိုတော့ အခုခြိနျမှာ ကိုယျ့အတှကျက အရမျးပြျောတယျ ကနြေပျတယျပေါ့နျော ပရိသတျအတှကျက အကုနျလုံးပေးပွီးပွီဆိုတော့ ဒီအခြိနျက ကိုယျ့အတှကျကိုယျ အခုလိုမြိုး ကိုယျ့မိသားစုအတှကျ ကိုယျ့အတှကျ အသုံးခတြယျ အခြိနျပေးရတယျ Balance ညီမြှတယျပေါ့နျော” လို့ဆိုလာခဲ့တာပါ။
နဝရတျရဲ့ အနုပညာကို အသိအမှတျ အပွုမခံရဘူးလို့ ပရိသတျတှကေ ဝဖေနျနကွေတာကိုလညျး ” ကိုယျ့ပရိသတျအသိအမှတျပွုရငျပွီးတာပဲ အနကျရှိုငျးဆုံး ရောကျနတေယျလို့ ယုံကွညျတယျ လကျခံတယျ ပရိသတျက ကိုယျ့ကိုခဈြတယျဆိုရငျ ကနြေပျပါတယျ” လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကကို စိတျပကျြသှားတယျလို့ ပွောနကွေတဲ့အပျေါ မှာလညျး ” အဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယျ။စိတျကုနျသှားတယျ စိတျပကျြသှားတယျ ဒီလိုမြိုးဆိုတော့ အျောဒီလိုပဲလားပေါ့ ဒါက မတတျနိုငျဘူးလေ သူတို့စညျးမဉျြးစညျးကမျးနဲ့ မကိုကျညီတဲ့အတှကျ ဒီလိုမြိုးအကယျဒမီဆိုတာက မရဘူး…. ဒါပမေယျ့လညျး အရေးမကွီးဘူးလို့လညျးထငျပါတယျ အခုကတော့ နသေားကသြှားပါပွီ နှဈတိုငျးနှဈတိုငိးက Nominate လေးနှဈလောကျဖွဈသှားတာ ရငျတှလေညျးခုနျခဲ့ရတာပေါ့ ” လို့ ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာပါ။
အသိအမှတျပွုမခံရတဲ့အတှကျ နားလိုကျတယျလို့ ဆိုကွတဲ့အပျေါမှာလညျး ” အဲ့လိုတော့မဟုတျဘူး တိုကျဆိုငျသှားတာပါ အမကေ စိတျကုနျသှားတာ တဈအခကျြ နောကျ အဖကေ နမေကောငျးဖွဈတယျ ၂ နှဈပေါ့နျော နောကျ အမကေပွနျဖွဈတယျ အဲ့လိုဖွဈသှားတာပါ” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှေ ပွနျလုပျခှငျ့ရမယျ ဆိုရငျလညျး လကျမခံတော့တဲ့အကွောငျးကို နဝရတျက ” လုပျခှငျ့ရမယျဆိုရငျလညျး လုပျဖို့မရှိဘူး ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ စိတျရောလူရောပငျပနျးတာလေ နဝရတျကြ အလုပျတဈခုကို အရမျး Serious ဖွဈတယျဆိုတော့ ဒီလောကနဲ့က အဆငျမပွဘေူး ကိုယျကလုပျရငျ အစအဆုံးကိုယျတာဝနျယူရတာလေ အဲ့ဒီတော့ ကိုယျတဈယောကျတညျး ပငျပနျးတယျ ဒါပမေယျ့ ပငျပနျးတာနဲ့ ပွနျရတာနဲ့က မတနျဘူး မတနျတဲ့အတှကျ နဝရတျက လုပျဖို့ စိတျကူးမရှိဘူး ” လို့ ပွောသှားခဲ့တာပါ ပရိသတျကွီးရေ နဝရတျကတော့ သူမအနနေဲ့ အနုပညာအလုပျကို လုပျဖို့ လုံးဝစိတျကုနျသှားတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျနျော…. ပရိသတျကွီးလညျး နဝရတျအတှကျ အားပေးစကားပွောခဲ့ကွပါအုနျးနျော …..
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နဝရတ်ကတော့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။လူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းသိပ်မရှိပေမယ့် မီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ သူမအနေနဲ့ အနုပညာလောကကို လုံးဝစိတ်ကုန်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ နဝရတ်က အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို ” လုပ်ခဲ့သမျှ လည်းကုန်ပြီပေါ့နော် ဒီ့ထက်လည်း လုပ်ပြစရာမရှိတော့ဘူး ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရော ရင်ထဲမှာရော ခန္ဒာကိုယ်သွေးသားထဲမှာပါ လုပ်တတ်တဲ့အရာအကုန်လုံးကို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ အခုကကျတော့ လုပ်သင့်တာနဲ့ လုပ်ချင်တာနဲ့ကို လုပ်နေတယ်” “၁၅ နှစ်လုံးလုံးကို ကိုယ်ကပြည့်ပြည့်၀၀ပေးပြီးပြီဆိုတော့ အခုချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်က အရမ်းပျော်တယ် ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော် ပရိသတ်အတွက်က အကုန်လုံးပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီအချိန်က ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အခုလိုမျိုး ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ကိုယ့်အတွက် အသုံးချတယ် အချိန်ပေးရတယ် Balance ညီမျှတယ်ပေါ့နော်” လို့ဆိုလာခဲ့တာပါ။
နဝရတ်ရဲ့ အနုပညာကို အသိအမှတ် အပြုမခံရဘူးလို့ ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်နေကြတာကိုလည်း ” ကိုယ့်ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြုရင်ပြီးတာပဲ အနက်ရှိုင်းဆုံး ရောက်နေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ် လက်ခံတယ် ပရိသတ်က ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်” လို့ ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကကို စိတ်ပျက်သွားတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့အပေါ် မှာလည်း ” အဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယ်။စိတ်ကုန်သွားတယ် စိတ်ပျက်သွားတယ် ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ အော်ဒီလိုပဲလားပေါ့ ဒါက မတတ်နိုင်ဘူးလေ သူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုးအကယ်ဒမီဆိုတာက မရဘူး…. ဒါပေမယ့်လည်း အရေးမကြီးဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ် အခုကတော့ နေသားကျသွားပါပြီ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုငိးက Nominate လေးနှစ်လောက်ဖြစ်သွားတာ ရင်တွေလည်းခုန်ခဲ့ရတာပေါ့ ” လို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပါ။
အသိအမှတ်ပြုမခံရတဲ့အတွက် နားလိုက်တယ်လို့ ဆိုကြတဲ့အပေါ်မှာလည်း ” အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး တိုက်ဆိုင်သွားတာပါ အမေက စိတ်ကုန်သွားတာ တစ်အချက် နောက် အဖေက နေမကောင်းဖြစ်တယ် ၂ နှစ်ပေါ့နော် နောက် အမေကပြန်ဖြစ်တယ် အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါ” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ် ဆိုရင်လည်း လက်မခံတော့တဲ့အကြောင်းကို နဝရတ်က ” လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်ဖို့မရှိဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ စိတ်ရောလူရောပင်ပန်းတာလေ နဝရတ်ကျ အလုပ်တစ်ခုကို အရမ်း Serious ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီလောကနဲ့က အဆင်မပြေဘူး ကိုယ်ကလုပ်ရင် အစအဆုံးကိုယ်တာဝန်ယူရတာလေ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပင်ပန်းတယ် ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းတာနဲ့ ပြန်ရတာနဲ့က မတန်ဘူး မတန်တဲ့အတွက် နဝရတ်က လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး ” လို့ ပြောသွားခဲ့တာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ နဝရတ်ကတော့ သူမအနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို လုပ်ဖို့ လုံးဝစိတ်ကုန်သွားတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နေ်ာ…. ပရိသတ်ကြီးလည်း နဝရတ်အတွက် အားပေးစကားပြောခဲ့ကြပါအုန်းနော် …..
ရခြေိုးနတေဲ့ ဗီဒိယို လေးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ခပြွလိုကျတဲ့ “ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့”